ရုရှား-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာများအပေါ် ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lavrov မှတ်ချက်ပေး - Xinhua News Agency
မော်စကို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov က “တရုတ်-ရုရှား ဆက်ဆံရေး၏ ပြိုင်ဘက်ကင်း ဗိသုကာ” နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၊ အစိုးရအကြီးအကဲများ၏ အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့် ကော်မရှင်မျိုးစုံ၏ အစည်းအဝေးအမျိုးမျိုးက “အလွန်ထိရောက်မှုရှိတာကို ပြသလျက်ရှိကြောင်း” ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရုရှားနိုင်ငံ၏ သံတမန်ရေးရာအကျဉ်းချုပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Lavrov က ပြောခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် သတင်းစာရှင်းပွဲ၌ စကားပြောနေသော ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov အား ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ ရလဒ်များသည် “အမျိုးမျိုးသော ချင့်ချိန်တွေးခေါ်မှုမှတစ်ဆင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိခွင့်ပေးပါတယ်” ဟု ဆင်ဟွာသတင်းဌာန၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားရာ၌ ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အောင်မြင်မှုများအနက် တစ်ခုမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရုရှား-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေး အနုတ်အသိမ်း စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Lavrov က ဆိုသည်။ ကုန်သွယ်ရေး အနုတ်အသိမ်းသည် ယမန်နှစ်ကထက် ၃၅.၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၆.၉ ဘီလီယံကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အထွေထွေအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအရ သိရသည်။
နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းတွင်လည်း ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာ မျှတမှုနှင့် တရားမျှတမှု၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် လွတ်လပ်ခြင်း၏ စံနှုန်းများကို ပူးတွဲကာကွယ်ရေးနှင့် သံတမန်ရေးရာဆိုလိုရင်းများနှင့် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကိုမတို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခများအားလုံး အခြေကျခြင်း ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း Lavrov က ပြောခဲ့သည်။
ယူရေးရှား စီးပွားရေးသမဂ္ဂနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက် ချိန်ညှိရေးအား အပြုသဘောဆောင်စွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရုရှား ထိပ်တန်း သံတမန်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နှင့် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံတို့သည အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အာရှ အလယ်ပိုင်းဒေသက အထူးအရေးပါလျက် ပါဝင်လျက်ရှိသော ရှန်ဟိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အတွင်း အနီးကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် လာမည့်လ၌ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့သည် ပေကျင်းမြို့၌ တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်စုံ လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း Lavrov က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Photo 1 : A video screenshot shows Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaking duringapress conference in Moscow, Russia, Jan. 14, 2022. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday spoke highly of the “unique architecture of Russia-China ties” and Russia’s and China’s joint efforts to strengthen bilateral cooperation and solve international problems. (Xinhua)
Photo2: A video screenshot shows Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaking duringapress conference in Moscow, Russia, Jan. 14, 2022. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on Friday spoke highly of the “unique architecture of Russia-China ties” and Russia’s and China’s joint efforts to strengthen bilateral cooperation and solve international problems. (Xinhua)